famolavolana mafana mamolavola sy miteraka tombony amin'ny fizotrany
Fampidirana mafana sy fanodinana hafanana
Famolavolana mafana dia dingana iray amin'ny famokarana fasteners indostrialy toy ny bolt, visy ary ny rivet. Ny hafanana dia ampiasaina mba hanalefahana ny vy izay mazàna dia ravina, bara, fantsona na tariby ary avy eo ny tsindry dia ampiasaina hanovana ny endrik'ilay vy amin'ny alàlan'ny fanatanterahana ny iray amin'ireto fiasa manaraka ireto: lohateny mafana, fanosorana, famonoana, fametahana, famonoana, famonoana , manety na miondrika. Ankoatr'izay, ny fanafanana bileta dia dingan'ny fomba tsara indrindra atao amin'ny famolavolana mafana.
SAMSUNG DIGITAL CAMERAM-panamainana induction moderno dia manome tombony maro kokoa noho ny fomba fanafanana hafa ary matetika ampiasaina amin'ny fampiharana fatorana. Ny fanafanana amin'ny alàlan'ny fampidirana dia manome hafanana azo antoka, azo averina, tsy mifandray ary tsy misy angovo amin'ny fotoana kely. Fanamorana ny induction dia mety ihany koa amin'ny fizotry ny famokarana an-tserasera noho ny fahaizany mamokatra tsingerin'ny famerenana miverina, haingana sy marina.
Famoronana mafana sy forging, fanitsakitsahana mafana sy fitrandrahana mafana dia misy ny famoronana ampahany izay nafanaina teo aloha hatramin'ny maripana izay malemy ny fanoherana ny fanovana. Ny mari-pana mahamay mafana amin'ny fitaovana indostrialy be mpampiasa indrindra dia:
Haja manomboka 1100 ka hatramin'ny 1250 C
Varahina 750 ºC
Aorian'ny fanamafisana ny fitaovana dia vita amin'ny karazana milina isan-karazany ny milina famoronana mafana: milina fanaovana tsindry mekanika, milina miondrika, milina fanodinana hydraulic, sns.
Ny fitaovana fanombohana ampiasaina amin'ny forging dia aseho amin'ny endrika studs boribory, efamira (billet) na fitaovana fisotroana.
Ny lafaoro mahazatra (gazy, solika) ampiasaina hampafana ny faritra fa azo ampiasaina koa.
Tombony fanamafisana induction:
Mitsitsia fitaovana sy angovo miampy fahalemena
Kalitao lehibe kokoa
Ny fanaraha-maso ny dingana
Fotoana fohy kokoa noho ny fanafanana
Kely oxidise sy ny famokarana mizana dia ambany dia ambany
Fanitsiana mora sy marina ny mari-pana ampiharina
Tsy ilaina ny fotoana anaovana ny lafaoro alohan'ny fanamainana sy ny fikolokoloana (ohatra aorian'ny na mandritra ny faran'ny herinandro rehefa mila fotoana bebe kokoa)
Fanaovana automatisation sy fihenan'ny asa ilaina
Ny hafanana dia azo alefa amin'ny teboka iray manokana, izay tena manan-danja tokoa amin'ny faritra misy faritra iray ihany
Fahombiazan'ny hafanana lehibe kokoa
Ny toe-piainan'ny asa tsara kokoa satria ny hafanana misy eto amin'ny rivotra ihany no an'ny ampahany
Ny fizotran'ny forging sy mafana mamorona dia dingana iraisana amin'ny famokarana sehatra indostrialy maro toy ny fiara mandeha amin'ny lalamby, lalamby, aerospace, solika sy gazy, rojo vy ary forging.
Sokajy Technologies Tags bara mafana mamorona, bileta mafana mamorona, mividy lafaoro mamorona mafana, manorina, milina forging, mamorona mafana, vidin'ny lafaoro mafana mamorona, milina mamorona mafana, dingana fanaovana mafana, induction forging, Lafaoro fanasongadinana, vidin'ny lafaoro fametahana induction, fanorana mony, induction hot forming furnace Post Fikarohana